के सुतेको बेला धेरै घुर्नु रोग हो? किन हुन्छ? कसरी छुट्कारा पाउने? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
के सुतेको बेला धेरै घुर्नु रोग हो? किन हुन्छ? कसरी छुट्कारा पाउने?
कमला गुरुङ शनिबार, माघ ३, २०७७, ११:२४:००
काठमाडौं- सुतेको बेला धेरैजसो मानिसहरु घुर्ने गर्छन्। हामीलाई लाग्छ, सुतेको बेला घुर्नु सामान्य प्रक्रिया हो।
सुतेको बेला घुर्ने सामान्यता धेरै मानिसहरुमा देखिने तर वास्ता नगरिएको समस्या हो। समयमै उपचार नगरे यसले दीर्घकालीन समस्या ल्याउन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्।
सामान्यतया घुर्ने समस्या श्वास फेर्ने नली सानो भएर हुन्छ। श्वास फेर्ने नली विभिन्न कारणले सानो हुन्छन्। चिकित्सकका अनुसार सय जना व्यक्तिमध्ये १५ देखि २० जनालाई यो समस्या देखिन्छ।
सुतेको बेला घुर्नु कस्तो समस्या हो? के कारणले हुन्छ? यसको उपचार लगायत विषयमा हामीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका नाक, कान, घाँटी तथा घुराई रोग विशेषज्ञ डा योगेश न्यौपानेसँग कुराकानी गरेका छौं। डा न्यौपानेसँग गरिएको भिडियो कुराकानीको सम्पादित अंशः
सुतेको बेला घुर्नु कस्तो समस्या हो?
– सुतेको बेला घुर्ने समस्या सामान्यतया धेरै मानिसहरुमा देखिने तर वास्ता नगरिएको रोग हो।
– श्वास नली सानो हुँदा उक्त नलीबाट हावा जाँदा आवाज आउँछ, त्यही आवाज घुराई हो।
– घुर्ने समस्याले दीर्घकालीन समस्या ल्याउने रोग हो।
मानिसमा घुर्ने समस्या किन हुन्छ ? कारणहरु के के हुन् ?
– सामान्यतया यो समस्या श्वास फेर्ने नली सानो भएर हुन्छ।
– मुखबाट श्वास फेर्दा जिब्रो पछाडी धकेलिने भएकाले मुख खोलेर श्वास फेर्ने मानिसहरुमा श्वास नली सानो हुन्छ।
– टनसिल ठुलो भएमा। त्यसले श्वास नली÷हावा जाने बाटो सानो बनाउँछ।
– अनुहारमा हड्डी, माथिल्लो र तल्लो च्यापुहरु सानो भएमा पनि घुर्ने समस्या हुन सक्छ।
घुराई सामान्य हो या जटिल खालको भनेर कसरी छुट्याउन सकिन्छ ?
– घुराई सामान्य या रोगको रुप लिइसकेको हो भनेर छुट्याउन आवश्यक छ।
– घुराईको मापन गर्न चिकित्सकहरुले स्लीप स्टडी गर्छन्।
– स्लीप स्टडी मार्फत व्यक्तिको घुराईको स्तर मापन गर्न सकिन्छ।
घुराईको समस्या समयमै उपचार गरिएन भने यसले निम्त्याउन सक्ने जटिलताहरु के के छन् ?
– सुतिरहेको बेला शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुँदै गए विभिन्न जटिलता निम्त्याउन सक्छ।
– मुटुको समस्या, पक्षघात हुने संभावना सामान्य व्यक्तिलाई भन्दा धेरै हुन्छ।
– आँखामा जलविन्दु÷आँखाको नसा सुक्ने संभावना धेरै हुन्छ।
– प्रेसर, सुगर, ग्याष्ट्रिक जस्ता रोगहरु राम्रोसँग नियन्त्रण हुँदैन।
– यौन इच्छा कम हुँदै जान्छ, यौन दुर्वलता/अक्षमता हुन्छ।
घुर्ने समस्याले कुन उमेर समूह÷वर्गलाई बढी सताउँछ ?
– सामान्यतया यो समस्या महिलाभन्दा पुरुषमा बढी देखिन्छ।
– सय जनामध्ये १० देखि २० जनालाई यो समस्या छ।
– ५० वर्ष नाघेका मानिसहरुमा यो समस्या आम रुपमा देखा पर्न थाल्छ।
– मोटा मानिसहरुमा यो समस्या बढी देखिन्छ।
घुर्ने समस्याका विषयमा मानिसमा भएको भ्रम र यसका सत्यता के के छन् ?
– सुतेको बेला घुर्ने समस्या सामान्य हो र यसले असर गर्दैन भनेर सोच्नु भ्रम हो।
मानिसहरु कुन बेला चिकित्सकको परामर्शमा जानु पर्छ ?
– सुतेको समयमा घुर्छ र श्वास फेर्न अड्किन्छ भने यो समस्या हो।
– घाँटीमा श्वास अड्केर सुतेको बेला एक्कासी उठ्नु।
– बिहान उठ्दा घाँटी सुख्खा हुनु, टाउको भारी हुनु र दुख्नु यसका लक्षण हुन्।
– निन्द्रा नपुगेको कारणले चिडचिड हुने, व्यवहार परिवर्तन हुनु।
– यसले शारीरिक र मानसिक रुपमा पनि असर गर्ने भएकाले चिकित्सकको परामर्शमा जानुपर्छ।
घुर्ने समस्याबाट कसरी छुट्कारा पाउन सकिन्छ ?
– यो औषधि खाएर निको हुने रोग होइन।
– घुर्ने समस्याले रोगको रुप लिइसकेको अवस्थामा इण्डोस्कोपी गरेर हेर्नुपर्छ।
– धूमपान तथा मद्यपान नगर्ने, नियमित व्यायाम गर्ने र तौल घटाउनुपर्छ।
– सुत्दा कोल्टे फर्केर सुत्नुपर्छ।
– घुर्ने समस्या जटिल भइसकेको अवस्थामा चिकित्सकले अवस्था हेरेर उपचारको प्रक्रिया अघि बढाउँछन् ।
उपचारका लागि बिरामीले कति पैसा खर्च गर्नुपर्छ ?
– बिरामीले तौल घटाउन सके २० देखि ३० प्रतिशत समस्याको समाधान हुन्छ।
– सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया गरे ५० देखि ६० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ।
– सिप्याप खरिद गर्दा ८० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ।
अन्त्यमा सल्लाह सुझाव के दिन चाहनु हुन्छ ?
– स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुपर्छ।
– बाहिरी जंक तथा फास्ट फुड नखाने र नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ।
– केही समस्या देखिना साथ चिकित्सकको परामर्शमा जानुपर्छ।